Ny fitrandrahana mitrandraka Florida dia mampiasa Dredge Bucketwheel amin'ny Dig Ore
Jona 30, 2009
Source: Review momba ny fanodinana iraisam-pirenena
Associated Minerals Corp. miasa amina dredger bucketwheel ao Green Cove Springs, Florida, atsimon'i Jacksonville. Ny dredge "Rocky Ford" dia mihady fasika misy mineraly misy rutile, zircon, ary ilmenite.
Mampiasa paompy 22 santimetatra ilay dredge. Mpiasa miisa 108 no mihazona ny dredge, milina mando akaikin'ny dredge, milina maina eo amin'ny kompleksan'ny orinasa, ary ny birao. Ny dredge dia mandeha fiovanana valo ora isan-andro, 363 andro isan-taona. Ny dredge dia mandady tsikelikely amin'ny alàlan'ny fametrahana azy, izay eo amin'ny tanimbolin'ny Union Camp. Voavoly ny hazo ary nesorina sy notahirizina ny tampon-tsoavaly talohan'ilay dredge. Ny fako amin'ny siny dia mandavaka fasika mainty, avelany ao anaty tahiry fotsy madio, izay arofina, rakotra topsoil ary afangaro amin'ny ahitra.
Tokony ho dimy kilaometatra eo amin'ny tranon'ny foibe, lalana ambanin'ny tany, mankany amin'ny tanimbary ary mankany amin'ny faritry ny hazo ny toerana misy ny fitrandrahana. Ny dredge dia mampandalo ny 1,000 mankany 1,200 tongotra lava, taribin'ny tariby vatofantsika.
Mihady eo am-pototry ny banky ny mpamaky paty, ary mitsoka ao amin'ny banky mba afangaro ny mineraly. Miaraka amin'ny siny-nosy dia mandevona ny 900 ho 1,200 taonina isan'ora, izay mandika ho 20,000 taonina iray ary fito tapitrisa taonina isan-taona. Nividy ny siny Soba 500 HP avy ao Ellicott ny AMC® Masinina Baltimore hisolo to cutterhead rotate 1200 HP. Ny Ellicott® famoahana tototry ny marika siny-famoahana namoaka ny gouche teo aloha mihoatra ny 2: 1 na dia latsaky ny antsasaky ny fanjifana herinaratra.
Ny fitaovana dia apetaka any an-tampon'ny fikosoham-bolo avo efatra metatra izay manaraka ny dredge, mandalo trommel izay mamoaka ny habe, avy eo amin'ny alàlan'ny andiam-boribory telo izay manasaraka ireo mineraly mavesatra mankany amin'ny manodidina ny 85 isan-jato. Ny mineraly dia mitahiry 4,800 5 metatra miala, ampitaina amin'ny alàlan'ny fantsona polyethylene enina santimetatra amin'ny fampiasana paompy 4XXNUMX ″ telo. Ny kamio no mitondra azy any amin'ny vovo-maina, izay misy ny fifangaroan'ny hery misintona sy ny herinaratra manasaraka ireo mineraly.
Nanazava ny tompon'andraikitra ao amin'ny vondrona fa ny tahiry dia ilay toerana misy ny torapasika tranainy iray izay nilatsaka ny ores tamin'ny valan-javaboary lehibe iray amin'ny vavan'ny renirano. Ny tahiry dia avy amin'ny iray kilometatra toradroa mankany iray kilometatra toradroa, misy 35 ny halaliny ary misy akora 100 tapitrisa taonina. Ny morontsiraka taloha dia 15 mile ao afovoan-tany.
Ny literatioran'ny orinasa dia mametraka ny famokarana isan-taona ny asa Florida amin'ny rutile 30,000 taonina, zircon 35,000 taonina ary ilmenite mihoatra ny 60,000 taonina, ary koa leucozene, monazite, ary staurolite kely kokoa. Ny kalitaon'ny mineraly dia avo dia avo, ary ny zircon dia haavon'ny fahadiovana mety amin'ny fampiharana keramika manakiana kokoa.
Ny Minisitry ny Mineraly dia iray amin'ireo orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny orinasa dia fizarazarana ny RGC Ltd. (Renison Goldfields).
Navoaka indray avy amin'ny Review International Dredging Review